Stockholm: Wiil Soomaali ah oo la baafinayo | Somaliska
Wiilka lagu magacaabo Ahmed oo 29 sano jir ah ayaa waxaa la waayay meel uu jaan iyo cirib dhigay 4-dii bishii Maarso ee la soo dhaafay. Ahmed ayaa markii dad ugu wardambaysay waxa uu ku sugnaa xaafada Fisksätra ee ka tirsan Kamuunka Nacka, Stockholm. Boorsadiisii ayaa laga helay maktabada Nacka 8-dii bisha Maarso iyadoo aan wax dambe laga maqal. Ahmed ayaa wararka qaar sheegayaan in uu mudo ku noolaa waqooyiga Sweden. Hadaba Soomaalida Sweden ku nool waxaa laga codsanayaa in ay soo gudbiyaan wixii macluumaad ah ee ay ka ogyihiin Ahmed. Fadlan haddii aad aragtay wiilkaan ama aad ogtahay cid garanaysa noo soo gudbi warbixinta ama la xiriir booliska adiga oo wacaya telefoonka 114 14. Fadlan sidoo kale warbixintaan gaarsii asxaabtaada iyo qaraabadaada. Baafinta wiilkaan ayaa lagu daabacay bogga dadka la waayay ee lagu magacaabo Missing People Sweden.
Wiilka lagu magacaabo Ahmed oo 29 sano jir ah ayaa waxaa la waayay meel uu jaan iyo cirib dhigay 4-dii bishii Maarso ee la soo dhaafay. Ahmed ayaa markii dad ugu wardambaysay waxa uu ku sugnaa xaafada Fisksätra ee ka tirsan Kamuunka Nacka, Stockholm. Boorsadiisii ayaa laga helay maktabada Nacka 8-dii bisha Maarso iyadoo aan wax dambe laga maqal.
Ahmed ayaa wararka qaar sheegayaan in uu mudo ku noolaa waqooyiga Sweden. Hadaba Soomaalida Sweden ku nool waxaa laga codsanayaa in ay soo gudbiyaan wixii macluumaad ah ee ay ka ogyihiin Ahmed. Fadlan haddii aad aragtay wiilkaan ama aad ogtahay cid garanaysa noo soo gudbi warbixinta ama la xiriir booliska adiga oo wacaya telefoonka 114 14.
Fadlan sidoo kale warbixintaan gaarsii asxaabtaada iyo qaraabadaada.
Baafinta wiilkaan ayaa lagu daabacay bogga dadka la waayay ee lagu magacaabo Missing People Sweden.
ASC dhamaan walalha somaliyed meel kasto oo aad joogtaan
salaan kadib waxaan idinka codsanaa hadaa war ka heysaan
inaa su,aal idinka weydiya idinkoo mahadsan
waxaan ahay gabar ku nool Sweden wadankan waxaan ku joogaa da,yar waxaaana ka soo tagtay hal wiil iyo seygeyga waxaan rabay waxaan rabaa inaa dacwo ufuro marka maxaad iga dhihi leheedeen fikirkiinu waa ii muhiin waana mahadsantiin All inta ku hadashay afka somaliga
waa ufuri kartaa haday da,daada gaarsiisantahy 16 sano waa say ila tahay yee . dadka wax ka maqanyihiin ayaad ka mid athay kaliya uun waxaad uga duwantahay da,da marka waa caadi udacwoo alle SBXWW hakuu sahlo arintaada
@nasriin: hadii aad markii aad isdhiibtay sheegatay saygaaga iyo wiilkaagaba, waa caadi lkin hadii anaad sheegan markii hore macquul mahan xataa adiga laftaada ayaaba macquul ah inay samenkugu yeelato markaa aad sheegto
somali citizen and abuu mohamed walalayalow wax aqbaar qofkii ka haayo dadka aan wax iskudhlin arimahooda isoo gudbiya aad baan ugu bahanahay thans saxibayal